Vaovao - Fandefasana entana any ivelany amin'ny 2021
GOJON Manatitra Rafitra Mpanatitra Kisary Auto sy PMS mankany Thailand
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2021, ny tsipika mpandefa valizy mandeha ho azy feno GOJON ary ny System Management System dia namita ny famokarana ary nizaha toetra am-pilaminana. Ity andiana conveyor feno ity dia hampiasaina amin'ny tetikasan'i Bangkok, Thailand.
Efa niara-niasa tamin'ity mpanjifa ity izahay efa 10 taona mahery. Ny fahatokisan'ny mpanjifa no antenainay.
Miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra tena tsara, tambajotra marketing tonga lafatra ary tsara alohan'ny serivisy fivarotana, serivisy fivarotana ary serivisy aorian'ny varotra, ny vokatra GOJON dia amidy amina firenena maro toa an'i Alemana, Italia, Espana, Gresy, Russia, Belarus Japan, Thailand ary India sns ary nahazo fiderana avo an'ny mpanjifa.
GOJON mino fa ny Passion dia mahatratra ny nofy ary mamorona fahagagana ny nofinofy, ary hifikitra hatrany amin'ny orinasa sprite hoe "Omeo ny vokatra tsara indrindra sy ny serivisy tsara indrindra amin'ny vidiny mirary".
Manantena ny hitombo miaraka amin'ny mpanjifa i GOJON ary hamorona fandresena mandritra ny fotoana maharitra.
GOJON Alefaso ny tsipika Smart Smart mankany Rosia amin'ny volana martsa ary ny tsipika mpanaterana baoritra mandeha ho azy mankany Belarus amin'ny volana aprily - aprily 2021
Martsa, 2021, ny fitaovana GOJON's Smart: Auto Rotator, Auto Breaker ary ny rafitra conveyor dia vita ary nozahana tsara tao amin'ny atrikasa. Ity tsipika maranitra ity dia hampiasaina ao amin'ny Moskoa, Rosia.
Aprily, 2021, ny tsipika mpandefa valizy mandeha ho azy feno GOJON dia nahavita ny famokarana ary nisedra tsara. Ity tsipika mpampita ity dia hampiasaina ao amin'ny Minsk, Belarus.
Amin'ny maha-mpanamboatra matihanina amin'ny mpampita orinasa iray manontolo, tsipika Smart Laminating Single Facer, rafitra fitantanana famokarana ary boaty fanamboarana boaty, sns, GOJON dia nanjary orinasa teknolojia avo lenta ary laharana voalohany amin'ny fahaiza-manao R&D amin'ireo indostrian'ny milina fonosana ao an-trano sy any ivelany . GOJON dia mampifangaro ny R & D, ny orinasa mpamokatra entana, ny varotra ary ny serivisy aorinan'ny varotra, ny fomba fitantanana maoderina sy ny fomba fiasa mba hanomezana vokatra azo antoka sy marin-toerana, vahaolana feno fonosana feno ary kojakoja mifandraika amin'izany.
GOJON dia manolo-tena hanome vahaolana turnkey miaraka amin'ny vokatra ambony sy serivisy tonga lafatra ho an'ny orinasa bebe kokoa hamoronana lanja sy tombony.
Roller Conveyor Systems, Carte Conveyor, Efijery fiasan'ny atrikasa, Masinina maranitra ho an'ny fonosana taratasy, A3 Taratasy fampirimana, Erp Banking,